Adana, Hava Sporları Sınavından Başarıyla Çıktı – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean01 AdanaAdana waxay ku guulaysatay imtixaanka Isboortiga Ciyaaraha
Adana waxay ku guulaysatay imtixaanka Isboortiga Ciyaaraha
12 / 10 / 2017 01 Adana, tareenka, GUUD, TURKEY
Ku-simaha Duqa Magaalada Adana ee caasimadda Ramazan Akyürek oo soo bandhigay koobab iyo abaalmarin ay u direen duuliyeyaasha ku guuleystay Fly-Air Aviation Festival
Festifaalka Fly-In Dumarka Dumarka ah ayaa ka qaybqaatay duuliyeyaasha mihnadeed, waxay ku farxeen cirka of Cukurova. Ramazan Akyürek, Ku-xigeenka Duqa Magaalada ee Magaalada Muqdisho, ayaa soo bandhigay koobab iyo billado duuliyayaal ah oo la sheegay inay ku jiraan munaasabad lagu qabtay Xarunta Duulista Duulinta. Isagoo carrabka ku adkeynaya in Adana ay ku guulaysatay imtixaan muhiim ah oo ku saabsan cayaaraha hawada, Akyürek ayaa yiri, waxaan ku faraxsannahay horumarinta Adana iyada oo faa'iidooyinkeeda gaarka ahi ay ka jirto jawiga cimilada, meteorology iyo juqraafi.
Adana Fly-In Diyaarad Duulis ah, oo ay abaabuleen Isboortiga Isboortiga iyo Isku-duulida Diyaarinta Kelilmiska, ayaa ahaa goob jimicsi xiiso leh. Ku dhowaad diyaaradaha 40 iyo duuliyayaasha 50 ayaa ka qaybgalay xaflad, tartannadii iyo tartamadii tartanka. Heerka xawaaraha, Mesut Göçer ayaa ku guuleystay kaalinta koowaad, Ali Özler ayaa ku guuleystay kaalinta labaad halka Atilla Hacısüleymanogle uu ku guuleystay kaalinta saddexaad. Ferhat Tigrel, Ali Özler iyo Atilla Hacisuleymanoglu ayaa ka qeyb galay sharaftii foosha xumayd ee tartanka.
Duuliyayaashii guuleystay, koobab iyo bilado ayaa laga helay gacan-ku-haynta degmada Rashan Aalkiriya. Madaxweyne Ku-Xigeenka Ramazan Akyürek ayaa u hambalyeeyay madaxda sare ee Duulimaadyada Duulista Diyaarinta ee Kelinding inay ka qaybqaateen kor u qaadista munaasabadda Adana. Akyürek wuxuu xusay in Diyaarad Diyaaradeed ee Kelinding ay fulisay oo ay si guul leh u fulisay howlgallo aad u qiimo badan oo ku saabsan cayaaraha hawada, waxaanu yidhi, waxaan si daacadnimo leh ugu mahadcelineynaa waxqabadyada waxbarasho iyo ururada si loo dhiirigeliyo oo loo sii wado duulimaadka. Maaddaama ay tahay degmooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, waxaan sii wadi doonnaa in aan taageerno ururada isboortiga ee hoos yimaada hoggaanka madaxweynaha Hoosyinka Warqadda. "
Xilliga Barafka ee Ciyaaraha wuxuu xirayaa xilli ciyaareed si guul leh
AKUT waxay ku guuleysatey guusha ay gaartay ciyaaraha barafka
Imtixaanka dhiirigelinta TCDD 30 December
Imtixaanka Silkworm ayaa sii wadaya si guul leh
Ardayda Dhameystirtay Hawlgallada Taakulaynta Tareennada Alimunotermit
Bogus Baaritaano Gaadiid ah oo Gaar ah ayaa lagu guuleystay
Laanta korontada ee guriga ayaa si guul leh u gudbisay imtixaanada E1000
Gaadiidka Kocaeli ayaa si guul leh u gudbiya imtixaannada
Wasiirka Arimaha Dibadda: Bilow Dhageeyso barnaamijka Keydka qoraalka
Xadhiggii koowaad ee buundada ayaa si guul leh looga jiiday
1915 Imtixaannada Fuqa ee Canakkale Bridge waxaa lagu dhammaystiray si guul leh
Tijaabooyinka Nidaamka Isgoysyada OMÜ
Duqa magaalada Malatya Cakir, Imtixaanka gawaarida wuu sii waday! | Gaadiidka Malatyada
Degmada Magaalooyinka Magaalada Adana
Ogeysiis Qandaraasle ah: Tikidhka Shidaalka ee Tiknoolajiyada Qaranka ee Tikidhka Qalabka (TÜVASAŞ)